NgoSeptemba 2016 - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » 2016 » EyoMsintsi
Archives Monthly: Septemba 2016
Isikhundla sobudlelwane benkampani Ubhaliso lweNkampani kuphela, isizwe saseNew York, i-NY Isiqendu i-4-6 iiveki, siqala i-10 / 3 Imvuzo ayinikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe kwi-website ye-10 / 03 / 16. I-ofisi esekelwe ekugxineni i-ofisi ebonakalayo ngokwenene kumabonwakude ifuna i-Associate Casting. Umxhasi oLawulayo uya kuthatha indima ephambili kwinkqubo yokukhangela ezininzi ...
I-Assistant Assistant Company I-City kuphela, i-State Portland, OKANYE Ixesha le-4 iintsuku - 10 / 20, 10 / 22, 10 / 24 kunye ne-10 / 25 Imvuzo ayinikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 I-10 / 20 / 16 I-Website ayiyi unikezelwa Yabelana Ngomsebenzi Ukukhangela ukusebenza kanzima ukunceda izandla kunye namava obukhohlakeleyo. Lo msebenzi ohlawulayo. Sidinga Uncedo lwee-3 zee-comedy specials kwiintsuku ze-4. ...
I-Grip Inkampani Ababhalisayo kuphela iSixeko, i-State Ft Lauderdale, i-FL Ubude beentsuku ze-3, iqala i-10 / 6 Imvuzo ayinikeziwe I-Job posted on 09 / 28 / 16 Faka isicelo nge-10 / 06 / 16 Iwebhusayithi engaboniswanga Yabelana Ngomsebenzi Ukujonga ukuba uncedo ekusetyenzisweni kwi-Fort Lauderdale. Iintsuku ze-studio ze-2 kunye nomnye kwindawo. Bhalisa ngoku ngeenkcukacha ezininzi sele sele ubhalisile? Nceda Tyikitye ...
Incedisi Ikhamera Inkampani Ababhalisi kuphela iSixeko, i-State New York, i-NY Ixesha le-10 iintsuku, iqala i-9 / 30 Imvuzo ayinikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe yi-09 / 30 / 16 Iwebhusayithi enganikezwayo Yabelana Ngomsebenzi Ukufuna i-NYC enolwazi I-AC esekelwe ukujoyina iqela lethu. Olu luphawu lokuhamba kodwa uya kuhlala ushiya kwi-NYC. Iimbopheleleko ziquka: Ukulawula yonke ikhamera ...
UMququzeleli woPhuhliso (PA)
I-Coordinator Coordinator (PA) Inkampani ababhalisile kuphela kwiSixeko, i-State Los Angeles, i-CA Ubude bee-5 iintsuku, iqala i-10 / 17 Imvuzo ayinikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe yi-10 / 17 / 16 Iwebhusayithi engaxhaswanga Ngokwabelana Ngomsebenzi Ukujonga I-ace Prod Coord onokugqoka iimboti ezimbalwa ze-combo ezishiya / zokunyakaza zokuphila. Ukusebenza nomvelisi. I-1 scout, i-1 prep, ipuphu ye-2, ukugoqa kwe-1, ...
Mlawuli weNkonzo zoLuntu
Umlawuli weNkonzo zoLuntu I-Subscribers kuphela kwisiXeko, i-State Seattle, i-WA Ubude obungapheliyo Umvuzo awunikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Iwebhusayithi engaboniswanga Yabelana Ngomsebenzi Kukhokelela ukuthengisa, ukukhuthazwa, ukuphuhliswa kobugcisa nokuphuhliswa kwe-Cascade Public Media izicwangciso zoshishino. IIMPENDULO ZOMSEBENZI OMSEBENZI I. Ndikhokele i-1. Ukuphuhlisa nokuqhuba isicwangciso sokunyusa iTV kwixesha langaphakathi (ikhefu ...
I-Mix mixer Inkampani I-City, iSikole saseKholeji saseKhorensi, i-TX Ubude beentsuku ze-2, iqala i-10 / 7 Imvuzo I-450.00 / 12 I-post ye-09 / 28 / 16 Ifakwe kwi-10 / 07 / 16 Iwebhusayithi engaxhaswanga iqela lebhola lebhola leMiscle Milk ngokubambisana ne-Texas A & M. Kufuneka ube neefowuni zomsindo kwaye uzimisele ukugquma kwakhona. Kufuneka ube yindawo ...
Ixesha le-3 iintsuku, iqala i-10 / 6 Imali I-150.00 / 12 I-post ye-09 / 28 / 16 I-10 / 06 / 16 I-Website ayizange inikezelwe Yabelana Ngomsebenzi Siphonsela iqela lebhola lebhola leMiscle Milk ngokubambisana ne-Texas A & M. Amava adingekayo. Kumelwe ukuba yindawo yokuhlala okanye ikwazi ukubonelela ngezindlu kunye nokuthutha. $ 150.00 / 12 ...
I-Ejensi ye-3 / 10 I-13 / 150.00 I-post ye-12 / 09 / 28 I-16 / 10 / 13 Ifakwe kwi-16 / 150.00 / 12 Iwebhusayithi engaxhaswanga Ngokwabelana Ngomsebenzi Iqonga lebhola le-Soccer Milk ngokubambisana neFlorida St .. Iimfuneko ezifunekayo. Kumelwe ukuba yindawo yokuhlala okanye ikwazi ukubonelela ngezindlu kunye nokuthutha. $ XNUMX / XNUMX Bhalisa ...
AbaHleli beeNkampani Ababhalisi kuphela kwiSixeko, i-State New York, i-NY Isiqendu Isiqhelo, iprojekthi / njengoko isisiseko sifaneleka Umvuzo we-$ 30 / hr ukuqala uYobhi ukuthunyelwa kwi-09 / 28 / 16 Iwebhusayithi engaxhaswanga Ngokwabelana Ngomsebenzi Ukukhangela abahleli abanolwazi kwi-freelance / projekthi esekelwe gigs. Nceda ube nobuchule kuzo okanye zombini i-Adobe Premiere / Emva kweempembelelo - ukujwayelana nezinye izinto ze-Adobe CS kunye kunye. Siya ...
I-News Producer Inkampani Ababhalisi kuphela kwiSixeko, kwi-State Portland, OKANYE Ixesha elingakhange linikezelwe I-WebSite / 09 / 28 Iwebhusayithi ayinikezwayo Yabelana Ngomsebenzi NGAMASI: Ukusasazwa ukususela ngo-16, singabambisene nabo base-Portland, kunye nokuzonwabisa okudibeneyo kubabukeli e-Oregon nase-SW Washington. Sibheke Kuwe ngeeyure ze-1953 ze ...
I-Animators Inkampani Ababhalisi kuphela kwiSixeko, i-State New York, i-NY Isiqendu Isikhululo, iprojekthi / njengoko isisiseko sifaneleka Umvuzo we-$ 30 / hr ukuqala uYobhi ukuthunyelwa kwi-09 / 28 / 16 Iwebhusayithi engaxhaswanga Ngokwabelana Ngomsebenzi Ukukhangela ama-animators abanolwazi kwi-freelance / project based based gigs. Nceda ube nobuchule kuzo okanye zombini i-Adobe Premiere / Emva kweempembelelo - ukujwayelana nezinye izinto ze-Adobe CS kunye kunye. Siya ...
I-1st Incedisi Ikhampani Inkampani ababhalisile kuphela kwisiXeko, i-State Tallahassee, i-FL Ubude beentsuku ze-2, iqala i-10 / 14 Imvuzo I-300.00 / 12 Umsebenzi othunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe kwi-10 / 14 / 16 Iwebhusayithi ayinikiweyo. Icandelo lebhola lebhola leMiscle Milk ngokubambisana neFlorida St Ideal candidate luza kuba namava kunye neFS7, iC300 okanye ikhamera efanayo. Grip experience ...
Umlawuli we-Photography Company Ababhalisi kuphela kwisiXeko, i-State Tallahassee, i-FL Isikhathi seentsuku ze-2, siqala i-10 / 14 Imvuzo I-750.00 / 12 Umsebenzi othunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe yi-10 / 14 / 16 Iwebhusayithi ayinikiweyo. Icandelo lebhola lebhola leMiscle Milk ngokubambisana neFlorida St Ideal candidate yayiza kuba nekhamera (FS7, C300 okanye efana nayo). Ukuba i-lighting / grip ...
Umphathi weMedia / DIT
Umphathi weMedia / iDIT Abhalisi beeNkampani kuphela iSixeko, i-State Albany, NY IXESHA NGO MHLANU 9 / 30 Umvuzo I-400 / 10 Umsebenzi othunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Faka isicelo nge-09 / 30 / 16 Iwebhusayithi engaboniswanga Yabelana Ngomsebenzi Kufuneka i-Albany I-Crew Local Crew NGO MHLANU WESUKU 9 / 30: * Kufuneka usebenze njengomphathi weeMedia / AC (amava: ujwayelene neendaba eziphathekayo malunga nenkampani enjalo ...
Iimviwo zeSixeko, uRhulumente McAllen, TX Ixesha leeveki ze-7, iqala i-10 / 5 Imvuzo ayinikeziwe I-Job ithunyelwe kwi-09 / 28 / 16 Ifakwe kwi-10 / 05 / 16 Iwebhusayithi engaxhaswanga Ngabelana Ngomsebenzi Sifuna inkalo PA malunga nokudubula okuza kuseningizimu yeKorpus Christi, TX. I-Field ye-PA inoxanduva lokuqhubela abaqhubi, ukuthaka isidlo sasemini, ukuphatha i-camera gear, ...